Dhawaan ayay ahayd markii uu madaxwayn Cade Muuse kala diray golayaashii degmada Bosaso kuwaasi oo in dhawaalaba uu ku kala dhexjiray muran iyaga iyo xukuumada uu hogaamiyo Madaxwayne Cade Muuse kagadaal markii ay cod aqlabiyad ah ay xilkii Gudoomiye nimo uga qaadeen Duqii Degmada Bosaso Khadar Xaaji Mire kaasi oo ay ku eedeeyeen in uu lunsaday Handi dadwayne iyo in uu laaluushay dhulka dadwayna sidaas la ajligeedna uu mutaysatay in xilka laga qaado waa sida ay hadalka u dhigeene.
Khadar Xaaji Mire ayaa xilkiisii Gudoomiyenimo ku waayay codkaasi aqlabiyada ah ee ay u qaadeen Golaha degaanka Degmada Bosaso kaasi oo sababay in iyakana lakala diro ka gadaal markii uu batan khilaafka xaga xilkaqaadista la xiriira.
Madxwayne Cade Muuse iyo wasiirkiisa Dawladaha hoose Cali Cabdi Awaare ayaa si xoog leh uga horyimid xilkaqaadistaasi lagu sameeyay Khadar Xaaji Mire kuna sheegay in xilka qaadistaasi ay tahay mid sharci daro ah iyaga oo sabab uga dhigay in meesha xilka looga qaaday Gudoomiyaha aysan joogin Masuuliyiinta dawladaha hoose iyo gudoomiyaha qudhadiisa.
Si kastaba ha ahaatee qoraal wareegto ah oo ka soo baxay Madaxwaynaha Puntland Cade Muuse ayaa lagu magacaabay Masuuliyiin ku meel gaar ahaan loo shaaciyay oo lagumagacaabay in ay yihiin gudoomiyada degmada Bosaso iyo kuxigeenkiisa kuwaasi oo lagu kala magacaabo Yuusuf Muumin Bidde iyo kuxigeenkiisa oo lagumagacaabo Yuusuf Maxamed Faarax.
Maamulkan Cusub ee loo magacaabay degmada Bosaso ayaa lagu sheegay qoraalka madaxwaynaha in ay leeyihiin awoodooda shaqo islamarakaasina ay wax ka qaban karaan hawlaha shaqo ee degmada [sida amaanka waxbarashada, caafimaadka IWM.]
Magacaabista masuuliyiinta cusub ee degmada Bosaso ayaa ka danbaysay kagadaal markii uu madaxwaynuhu kala diray xubinihii golaha degmada Bosaso.
Hanaankii dimuquraadiyadeed ee lagu waday in ay puntland ku dhaqanto islamarkaasina ay kagudubto heerka maanta lagu jiro ee ah in xil loo magacaabo shaqsi loona gudbo in ay bulshada dhexdooda iska magacawdo ayaan fari ka qodnayn waxaana moodaa in dimuqraadiyadii ay ku dhimatay Puntland maadaama aysan jirin tixgalin ka imaanaysa rabitaanka shacabka.
Dadwanaha Puntland ayaa u wada riyaaqay xilkaqaadistii lagu sameeyay Khadar Xaaji Mire hase ahaatee waxaan loo noqon doonin in xilka si fudud la isaga qaado maadaama uu cade musue golihii degaanka degmada Bosaso uu xoog ina adeernimo leh hanjabaadina ku jirto u adeegsaday isna hor istaagay xilkaqaadistaasi waa sida ay dadbadani qabaane.
Garowe: Khilaaf xoogan ayaa ku kala dhexjira gudoomiyaha baarlamanka Puntland iyo Cade Muuse.
Khilaaf gaaray heer sare ayaa u kala dhexeeya Madaxwaynaha Puntland Cade Musue iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi.
Sida laga wada warqabana Khilaafkaan ayaa ka danbeeyay markii uu gudoomiyaha Baarlanmaanku uu aqbali waayay ama uu qoonsaday qaabka ay u baxday miisaaniyadii sanadkii hore taasi oo ay waxbadan ka khaldameen islamarkaasina uu gudoomiyuhu ku celiyay golaha xukuumada isaga oo wax sarxan ka raadinaya.
Si kastaba Khilaakan ayaa gaaray meels are waxaana murankaasi uu u gudbay in ay soo kala dhexgasho maxkamada sare taasi oo uu Madaxwayne Cade Muuse magacaabay dhawaan.
Si kastaba ha ahaatee khilaafkaan ayaa ah mid si wayn la iskula dhexmarayo suuqyada iyo goobaha shaaha iyo qaxwaha lagu cabo ee magaalada garowe kaasi oo loogu riyaaqsan yahay gudoomiyaha Baarlamaanka sida uu ula dhaqmay Golaha xukuumada oo ay dadbadani ku sheegeen in ay yihiin gole aan u fadhiyin wax waxqabad ah xatooye mahane.
Wareegtooyinkii Cadde Muuse: